ချစ်သူမောင်: November 2008
HAPPY SWEET DECEMBER !!!!!!!
ထိုမျှများပြားလှသောစိတ်ဒါဏ်ရာများကိုသယ်ပိုးကာ ဘ၀ခရီးကိုဖြတ်သန်း ခဲ့ရသောမောင့်ရင်ခွင်ကိုမှန်းကြည့်ပါ။သို့သော်မောင်သည် စိတ်ခံစားချက်ကင်းမဲ့ခဲ့ပြီထင့် တော်တော်တန်တန် တုန်လှုပ်ခြင်င်းကင်းမဲ့စွာ နေတတ်ခဲ့သည်။ညီမလေးနှင့်ပါတ်သက်၍ အသေးစိတ်ပြောရန်ကျန်ပေဦးမည်မောင်မပြောချင် သော်လည်း ပြောပြပါမည် အလွန်သနားစရာကောင်းသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါ၏ ။ ကံကြမ္မာကိုမမြင်နိုင်ကြပါပေ ။ မောင်နှင့်ညီမလေး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်း မောင်တို့လွန်စွာပျော်ခဲ့ကြလေသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတူတူလုပ်ကြစက်ရုံထဲတွင်လည်းအတူတူ စားလည်းအတူတူသွားလည်းအတူတူဖြစ်သည်..... မောင်တို့ တစ်အားချစ်ခဲ့ကြပါသည်ညီမလေးသည်လည်းမောင့်အပေါ်ချစ်၏ ကြင်နာ၏ ထိုမျှမကတွယ်တာ၏။မောင်သည်လည်းညီမချစ်သည်ထက်မပိုလျှင်တောင်မလျော့ခဲ့သည်မှာသေချာ၏။ နှစ်ဖက်မိဘများကြည်ဖြူ ချစ်ရည်တူခဲ့ကြ၏။ညီမ၏အဖေအမေ တို့ကမောင့်အားချစ်ကြသလိုမောင့်မိဘများကလည်း ညီမကိုတအားချစ်ခဲ့ကြ၏ မောင့်မောင်နှမများကလည်း ချစ်ကြလေသည်သည်တစ်ခါတော့အလွန်ချမ်းမြေ့ သာယာသောဘ၀တစ်ခု ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီဟု မောင့်အထင်သည်တက်တက်စင်အောင်မှားခဲ့ လေသည်။ညီမနှင့်အိမ်ထောင်ကျပြီးတနှစ်နှင့်လေးရက်တိတိ ညီမဆုံးပါးခဲ့သည် ။ ထိုနေ့က မောင်နှင့်ညီမတို့ တစ်ညလုံးတစ်ခုတင်တည်း အတူတူ အိပ်ခဲ့ ကြလေသည်။မနက် ၄နာရီထိုးတော့ မောင် အိမ်နောက်ဖက်တွင်ရှိသောအလုပ်သမားတန်းလျားသို့အလုပ်သမားများကိုနှိုးရန်အခန်းတွင်းမှထွက်ခဲ့၏ အလုပ်သမားများကို နှိုးသည့်အချိန်မှာမောင့်အထင် ဆယ့်ငါးမိနစ်မျှသာသို့သော်ဘ၀တစ်ခုဆုံးရှုံးရမည်ကိုမောင်မသိခဲ့ပါချေ ။မောင်မောင်တို့နေသည့်အခန်းလေးသို့ပြန်လာချိန်တွင်အခန်းတွင်း မီးခိုးငွေ့များထွက်နေသည်ကိုမောင်တွေ့လိုက်ရ၏ မောင်တံခါးကို ဆွဲအဖွင့်မောင့်မျက်နာနှင့်လက်တို့တွင်မီးဟပ်ခံရတော့၏။အခန်းတွင်းသိုမောင်အတင်းတိုးဝင်ပါသော်လည်းဝင်၍မရခဲ့ပါပြန်ပြောလျှင်ရင်နာပါသည် နှလုံးသည်းပွတ်ကြေပြုန်းလုမတတ်ဖြစ်ရပါ၏မောင်ချက်ချင်းမီးသတ်ဆေးဘူးပြေးယူ၏တပြိုင်နက် အဖေတို့ကိုအော်ဟစ်အကူညီတောင်း၏ မောင့်တပည့်တို့သည်လည်းမောင့်နောက်မှမးသတ်ဆေးဘူးကိုယ်စီနှင့်အတူလိုက်လာပက်ဖျန်းကြ၏ သို့သော်ညီမကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရချေပြီမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတွင်သာ။မောင်ရူးသွားလောက်အောင်ပင် မောင့်အားရဲများစခန်းသိုခေါ်သွားသည်ကိုသာမောင်သိတော့၏ ပုဒ်မ၂၈၅ ၊ ၃၀၄(က) နဲ့ဖမ်းဆီးခံရ၏။ထိုနေ့က မောင်မည်သို့ဖြစ်မှန်းကိုယ်တိုင်မသိခဲ့သေမင်းသည်တစ်ညလုံးအတူတူ အိပ်ခဲ့ ကြသော်လည်း မောင့်အားချန်ထားကာညီမအားခေါ်သွားခဲ့၏တချို့ကပြောတော့အထုံပါလို့ပါတဲ့။ ဘုန်းကြီးပြောတော့နဂါးပြည်ကလာလို့ပါတဲ့ မင်းတို့ကတော့မီးကိုပူတယ်လို့ထင်ပေမယ့်နဂါးပြည်ကလာတဲ့သူဆိုယင်ဒီလိုနည်းနဲ့ပြန်ကြသူတွေများတယ်ဟူသတတ်။ခက်နေသည်ကမောင့်ဘ၀ပါ ဘ၀တစ်ခုပြီးတစ်ခုပျက်ခဲ့လေသလား ၀ဋ်ကြွေးလား မောင်မသိခဲ့နောက်ပြီးမောင်မသိခဲ့ရသော မောင်နှင့်ညီမ၏ အတိတ်ဘ၀ဆိုသောသိုက်သမိုင်း မောင်မယုံသော်လည်းကြားခဲ့ရ၏။မောင်တို့သည် ရွှေစက်တော်ဘုရားသိုက်မှလာကြသူများဟူသတတ် ။မောင်သည်အထက်စက်တော်ရာသိုက်မှဟုဆိုလေသည်မောင့်ထံ(သိုက်ထဲ)တွင်မိန်းမနှင့်ကလေးရှိသည်ဟုဆိုလေသည် ညီမသည်လည်း အောက်စက်တော်ရာသိုက်မှလာသည်ဟုဆိုလေသည်။ဖြစ်နိုင်ချေ ရာနှုန်း အနည်းငယ်ဖြစ်သော်လည်း မောင်တို့ညီမတို့မရွံ့ရဲစွာ ယုံကြည်ခဲ့ရဖူး၏။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မောင်တို့လက်ထပ်ပြီးသကာလ မထင်မှတ်ပဲရုတ်တစ်ရက်မောင်တို့ ရွှေစက်တော်ဘုရားသို့ရောက်ခဲ့ရ၏ ထိုမျှမက တိုက်ဆိုင်မှုက ရှိသေး၏ ထိုတိုက်ဆိုင်မှုကထိုရောက်သွားသောနေ့သည်ကား ညီမ၏ မွေးနေ့ နောက်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမှာ မောင်သည်အထက်စက်တော်ရာကိုသာရောက်ပြီး အောက်စက်တော်ရာကိုလုံးဝမရောက်ခဲ့ ညီမသာ မောင်မန်းချောင်းထဲရေချိုးကောင်းနေတုန်းအောက်စက်တော်ရာကို ရောက်သွားခဲ့၏ ။မောင်တို့နှစ်ယောက်ဝေးရမှာကြောက်၏ သို့သော်ဝေးခဲ့ကြ၏ဘ၀တွင်အပြင်းထန်ဆုံးစိတ်ဒါဏ်ရာ အမာရွတ်ဖြစ်ခဲ့ရ၏.....ထို့ကြောင့် မောင်သည်တော်တော်တန်ကိစ္စများတွင် ခံစားချက်ကင်းမဲ့တတ်လေသည် သို့သော် ခံစားမှုကားဒါဏ်ရာအမာရွတ်များပင်ဖြစ်လာခဲ့တော့၏။တခါတရံ...မောင်သည် တမ်းတတတ်၏ လွမ်းမိ၏ ဖျက်ပစ်ချင်သောအတိတ် များရှိ၏ အချုပ်အားဖြင့် ကေနှင့်ဇတ်လမ်း မီးနှင့်အိမ်ထောင်ကျခဲ့ခြင်း စသည် အတိတ်ဆိုးများကို မောင့် ဘ၀တွင်းမှ ပြန်ဖယ်ထုတ်၍ရပါလျှင် ဗွီဒီယိုတိတ် တခွေလိုပြန် REWလုပ်ပြီးဖျက်ပစ်လို့ရပါလျှင် ညီမမရှိတော့ဘူးဟူသောအသိမောင့်စိတ်ထဲတွင် အမှန်တစ်ကယ်သိရှိသွားခဲ့ပါလျှင် မောင် အတော်နေထိုင်ရသက်သာမည်ဟုထင်သည်သို့သော်ဘ၀ဆိုသည် ဗွီဒီယို တစ်ခွေမဟုတ် ခဲ့ ဒီဗွီဒီတချပ်သာဖြစ်လေတော့ လိုချင်သည့် အစိတ်ပိုင်းလေးမျှကိုဖျက်ပစ်၍မရ NEO 8 အထိမစွမ်းဆောင်နိုင်သေး အမှန်တော့ဖျက်ပစ်မရသောအရာများအဖြစ်စိတ်ထဲတွင်ညီမသည်လည်းအမြဲရှင်သန်နေဦးမည် ညီမရှိရာကိုတနှစ်လျှင်သုံးကြိမ်မျှ မောင်ရောက်ဖြစ်ဆဲ ၊ကေ ကတော့တခါတရံမောင့်ဆီကိုဖုံး ဆက်နေဆဲ ၊ မီးကိုလည်းမောင် မုန်းလျှက်နှင့်တခါတရံတိုက်ဆိုင်မှုများတွေ့မိလျှင် လွမ်းနေဆဲ သို့သော် ယ္ခုအချိန်တွင် မောင်သည် ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပီသစွာ အသက်ကလေးနှင့် ဘ၀ကိုခိုင်ခံ့တည်တံအောင် တည်ဆောက်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေချေပြီ ထို့အတူကလေးတစ်ဦး၏ဖခင်မလွဲမသွေအဖြစ် သက်ကလေးကလည်းမောင့်ကို ရင်သွေးရတနာလေးမွေးဖွားပေးတော့မည်ကိုစိတ်ကူးနှင့်ပျော်ရွှင်မြူးနေခဲ့သူတစ်ဦးပါ။သို့သော် တခါတရံ HEROS ဇတ်လမ်းတွဲများထဲကHiro လို Time travel ( အချိန်ခရီးသွားခြင်း)ကို ပိုင်နိုင်ခဲ့လျှင် မောင့်၏စိတ်ဒါဏ်ရာ အတိတ်ဆိုးများကိုပြန်ပြင်ချင်ပါသည်.........................သို့သော်ခုချိန်ထိ မောင့်စိတ်ထဲတွင်အရိပ်အဖြစ် ညီမလေးရှိနေဆဲ တခါတရံ အလွန်အမင်းတွေ့ချင်စိတ်ဖြစ်မိဆဲပါ
နိုင်ငံခြားရောက်သွားတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေး နဲ့ သူ့အဖွားကိုပြန်ရေးလိုက်တဲ့စာ
သားရိုသေသတိရစွာစာရေးလိုက်ပါတယ်။ဟိုနေ့က အင်တာနက်ကနေဖုံးပြောလို့ရလို့ ဖွားဖွားကျန်းမာ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကစက်မှုဇုံထုတ်တဲ့ဂျစ်ကားတွေလိုပုံမဟုတ်ပဲပုံလှလှလေးတွေပါ ။ဟိုနေ့က ဖေဖေတို့နဲ့
ကားပြပွဲလိုက်သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ကားတွေကလှမှလှ ကားတွေရဲ့အတွင်းခန်း ဘော်ဒီပြောစရာမရှိအောင်
လှတယ်။ ကြော်ငြာတဲ့ မော်ဒယ်မလေးတွေကလည်းကိုယ်တုံးလုံးနီးပါးဝတ်လို့ သားကတော့မျက်စေ့ရှက်ပါ
တယ် ခုမှရောက်ကာစမို့နေမှာနောက်တော့လည်းရိုးသွားမယ်ထင်ပါရဲ့။ထူးဆန်းတယ်ဖွားဖွားရေ သားတို့ဆီမှာ
ရှိတဲ့ဗိုက်ပူပူကားကြီးတွေထုတ်တဲ့ ချက်ပက်လက် ကုမ္ပဏီ ခုထိရှိသေးတယ် ဗျဖွားဖွားပြောတော့စစ်ကြွင်း
စစ်ကျန်ဆို ခုထုတ်ထားတဲ့ကားတွေကချက်ပက်လက်ဆိုပေမယ့် ကားကခပ်သေးသေး လှလှလေးတွေ
ကျွန်တော်တို့ဆီက ဂျစ်ကားတစ်မျိုးပဲထုတ်တတ်သလားအောက်မေ့ရ တယ်။
ဒီကိုမလာခင်တုန်းကဖေဖေ ၀ယ်စီးခဲ့တဲ့စက်မှုဇုံကထုတ်တဲ့ ရာဇာဂျစ်ဆိုတာ ဘီးလေးဘီးအင်ဂျင်ဂီယာ
စာရင်း ရှိတယ်ဒါပေမယ့် JEEP ဆိုတာကလွဲလို့ဘာမှကျမ်းကိုးမရှိဘုး။
ဒီမှာဆိုယင်တော့စုံလိုက်တာမှ HONDA ဆိုယင်နောက်ဖက်မှာ ကျမ်းကိုး လိုမျိုး CIVIC,ACCORD, TOYOTA
ဆိုယင်လည်းအများသား LEXUS,PARADO.LANDROVER ဆို DISCOVERY အစရှိသဖြင့်စာတမ်းသေးသေး
သားသားတို့ဆီမှာတော့ ဂျစ်ကားကိုပဲအမျိုးမျိုးကျမ်းကိုးလုပ်နေတာနေမှာနော် သားသားမှတ်မိသလောက်
ဆို ရာဇာဂျစ်၊ထီလာဂျစ်၊ရှမ်းစတားဂျစ်၊ ဒဂုံဂျစ်၊ချင်းတွင်းစတားဂျစ်၊မန္တလာဂျစ်၊ နိုင်ဂျစ်၊တော်တော်များတယ်
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေများတာမှန်ပေမယ့်ကျမ်းကိုးကတစ်ခုတည်း ရယ်
သားတို့စီးခဲ့တဲ့ ကားကိုတော့ မမတစ်ယောက်ကကင်ပွန်းတပ်ထားတာရှိသေးတယ် အသံထက်မြန်ပြီးပုလိပ်
မီးကြောင့်ထင်ခဲ့သောစိတ်ဒါဏ်ရာမှာ တော်တော်နှင့်မပျောက်ခဲ့ပါချေတစ်ကယ်ဆန်းစစ်လျှင် ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ကိုရေတွက်လျှင် ၁၉၉၆ခုနှစ်မှစ၍ ပါ တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်စွာနေဖြစ်ခဲ့သောရက်များစတင်ခဲ့ပါ၏ခြေထောက်တစ်ဖက်မကောင်း တော့သဖြင့်လည်းလောကနှင့်ဝေးရာတွင်ပုန်းအောင်းနေခဲ့မိခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။နှစ်အတန်ကြာ ပုန်းအောင်းနေစဉ် ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ တည်းကညီမတစ်ယောက်လိုခင်မင်ခဲ့သောညီမလေးဟုခေါ်သော ညီမလေးနှင့်မောင်ပြန်တွေ့လေသည် ။မောင့်မျက်နှာညှိုးငယ်နေခြင်းကို ညီမလေးသတိထားမိသည် ထိုနေ့ကသူငယ်ချင်းတစ်ဦး၏မင်္ဂလာပွဲတွင်ဖြစ်သည်။မောင်တစ်ယောက်တည်း တချာင်ထဲ တွင်ပုန်းအောင်းနေခြင်းကို ညီမလေးမနှစ်သက်ပါချေ မောင့်အားပြင်ပသို့ထွက်လာရန်ဖေးတစ်ဖက်လှည့် နှင့်ဖေးကူခဲ့သောမောင့်၏ကျေး ဇူးရှင်တစ်ဦးဖြစ်သောညီမလေးဖြစ်လေသည် ။မောင်အထီးကျန်နေမှန်းညီမသိ၏ ထို့အတွက် သူအလုပ်လုပ်မည်ဆိုလေ၏ မောင့်ကိုဝိုင်းကူစေ၏။ ၀ိုင်အမ်စီအေမှာဖွင့်သောမိတ်ကပ်သင်တန်းနှင့် ပန်းထိုးသင်တန်း အစရှိသည့်သတို့သမီးဝတ်စုံအငှားဆိုင်နှင့်ပါတ်သက်သည့်ဖက်ရှင်ဆိုင်ရာသင်တန်း ဆံထုံသင်တန်း အစရှိသောသင်တန်းပေါင်းများစွာကိုမောင် လိုက်အပ်ပေးခြင်းစုံစမ်းပေးခြင်း အကြိုပို့လုပ်ခြင်း မော်ဒယ်များနှင့်ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးခြင်း ။အစရှိသည့်အလုပ်များစွာကိုလုပ်ပေးယင်းမောင်အထီးကျန်ခြင်းမှစတင်ကင်းဝေးလာခဲ့သည်။ မောင့်စိတ်ကိုချမ်းမြေ့စေသည့်ညီမလေးပါ။တစ်နေ့တော့ မောင်တို့ခွဲခွာချိန်တစ်ခုကိုအစပြုလာခဲ့ပြန်၏....မှတ်မှတ်ရရ ညီမလေးသည်မောင်တို့ကုန်သည်အသိုင်းဝိုင်းနှင့်လည်းအဆက်စပ်ရှိခဲ့သည့်အတွက်ထိုလောကမှအတင်းများစွာမောင်နားနှင့်မဆံ့အောင်ကြားမိလေသည် မောင်ညီမလေးအပေါ်ရိုးသားခဲ့သည်မှာမောင် ဖာသာသိသည် ထို့အတွက်ညီမလေးကို အားနာစွာညီမလေးအနားမှမောင်အပြေးထွက်ခဲ့လေတော့သည်။အဆက်သွယ်တော့မပြတ်ခဲ့ပါချေ တယ်လီဖုံးကိုအသုံးပြု၍ မောင်တို့၏ နာကျင်ဖွယ်ရာများတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ရင်ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ကြပါ၏။ထိုသို့သောအခြေနေတွင်သာ...ညီမလေးနှင့်နှစ်နှစ်ခန့်ဝေးခဲ့ကြပါ၏ ပြန်တွေးယင်ရင်လည်းနာပါသည်။၂၀၀၀ ခုနှစ် ၏နေ့တစ်နေ့တွင် ညီမလေးနှင့်ခွဲခွာခဲ့ ရ၏ နောက်ပိုင်းညီမလေးနှင့်အဆက်သွယ်ပြတ်လုနီးပါးပါပေ တခါတရံ သတိရလို့ဖုံးဆက်ယင်တောင်မှ အမုန်းခက်လို့မေ့ပြီထင်.......မောင်နှင့်ညီမလေးလုံးဝမတွေ့ဖြစ်တော့ ညီမလေးကိုလည်းမကူညီဖြစ်ပြန် တစတစ နှင့်ဝေးကွာခဲ့သည်။ပါတ်ဝန်းကျင်၏ရိုက်ခတ်မှုဒါဏ်ကိုမောင်တို့နှစ်ယောက် အပြင်းထန်ခံစားရလေ၏။ထိုစိတ်ဒါဏ်ရာသည် ကိုယ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ခေါင်းဘယ်မရွေ့ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာမှားစေခဲ့လေပြီလား ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တတ်သောမောင့်အတွက်တော်တော်ခံပြင်းစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လေသည်။သို့ သော် ညီမလေး၏သိက္ခာတရား အတွက်ငဲ့ကွက်ပြီးညီမလေးနှင့်မတွေ့ဖြစ်အောင်မောင်နေခဲ့လင့်ကစား မောင်တခါတရံမောင်ငိုတတ်ခဲ့ပါပြီ.....ကေ့ကိုရက်ရက်စက်စက်ခွဲပစ်တတ်ခဲ့သောမောင် မီးကိုမုန်းတီးနာကျည်းစွာ စွန့်ပစ်ခဲ့သော မောင်တစ်ယောက် အတွက်လည်သည့်ဝဋ်လေလော .....မောင်မဆန်းစစ်မိပါချေ။ဒီလိုပဲအပေအတေအဖြစ်ပြန်နေဖြစ်ခဲ့ပြန်တော့၏ ။ ညီမလေးကိုချစ်ခဲ့လေပြီလားမောင်မခွဲခြားတတ်ခဲ့။အမှန်အစစ်သောအချစ်ကိုတွေ့ရှိချိန်ဟုဆိုလျှင် ၀ိုင်းရယ်ကြမည်လား တစ်ကယ်တမ်းပြောရလျှင် မောင်အထီးကျန်ဆန်စွာမနေချင်ခဲ့သော်လည်း မောင်သည်အား လုံးနှင့်ဝေးရာတွင်သာ နေဖြစ်လေ၏။ညီမလေးအမှတ်တရ................အလွမ်းညီမလေးအမှတ်တရ.............အလွမ်းညီမလေးအမှတ်တရ.....အလွမ်းညီမလေးအမှတ်တရ...အလွမ်းကဗျာ
ထားပါတော့လေ ကေနှင့်ဇတ်လမ်းပြီးတယ်ဆိုပါစို့ မီးကိုလွမ်းနေသောမောင်သည် မီးနှင့်ပြန်တွေ့တော့သည်သည်တစ်ခေါက်တော့မီးမောင့်ကို အဖြေပေးခဲ့လေသည် ။ကေနှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုလည်း မောင်ဝန်ခံချေသည်မောင်ဝဋ်လည်သည်လား မီးနှင့်မောင်တို့ မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်(ပြန်ရောက်ပြီးမကြာမီမှာပေါ့)Living Together ကိစ္စများကိုမီးလက်ခံခဲ့ သည့်အတွက်ဘ၀အစပိုင်းတွင်မောင်မီးကို လေးစားမဆုံးခဲ့ပါချေတစ်ကယ်တော့မောင်သည်မီး၏စရိုက်အမှန်ကိုမသိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမည် ။သည်လိုနှင့်မောင့်စိတ်ထဲတွင် ယောရှီဒါနှင့်နယ်လုပွဲ ထို့အတူမီးနှင့်နယ်လုပွဲတစ်ဖနဖြစ်ရလေတော့ချေသည်....အမှန်တော့သည်တမြို့တည်းတွင် မီးသည် ၂၁ လမ်း၌ နေလိုသည် မောင်ကစက်ရုံရှိရာ ရွှေပြည်သာသို့ အလုပ်လိုက်လုပ်စေလိုသည်။အိမ်ထောင်ကျပြီဆိုသော်လည်းမီးသည် အသွားမပျက် အပေါင်းသင်းများနှင့်ပျော်ရွှင်မပျက်ဖြစ်လေသည်မောင်သည်ကား အလုပ်ရိရာ မြို့စွန်သို့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့် အရောက်သွား ညနေအနည်းဆုံး ၈ နာရီလောက်မှပြန်ရောက်ဖြစ်တတ် သည် ည ၉ နာရီခန့်မှပြန်ရောက်လျှင်ကားမီးမျက်နှာညို လေသည် ထိုညများမောင်မီးနှင့်ရန်မဖြစ်လို၍ အပြင်၌ အိပ်ခြင်းများလေသည် ၊အပြင်ဆိုသည်ကားမောင့် ညီ၏ဆိုင်၊သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်၏အိမ်တွင်သာ။မီးသည်ကားမောင့်ကိုဂရုလည်းမစိုက် ပျော်ရွှင်လျှက်လျှပ်ပေါ်လော်လီသော ဟူသောထိုစာကားလုံး မသုံးစွဲရက်ခဲ့ မီးကိုချစ်သည့်မောင့်အချစ်သည်ကားမောင့်ဘယ်ခြေတွင် သေရာပါမည့် အရွတ်ပြတ်ဒါဏ်ရာ မောင့်၏စိတ်ဒါဏ်ရာများ မောင်အနေထိုင်ကျပ်ခဲ့တဲ့နေ့တွေ မီးနှင့်မောင်ပျော်ခဲ့တဲ့မန္တလေးသင်္ကြန် ၊ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၏ ၅/၆ အဆောင် ရီနယ်မယ်ဒီကယ်နားက ပီအာ ခန်းများ ထိုအရာများကား မီးကိုချစ်မိသော ၆နှစ်တာကာလ၏ စိတ်ဒါဏ်ရာအမာရွတ်များပင်၊ကဲကွယ်ခွဲကြမယ်မီးရယ်လို့မပြောသေးခင်မှာပဲ............ကျွန်တော့ချစ်သူများအကြောင်း(၉)ကျွန်တော့ချစ်သူများအကြောင်း(၁၀)
ဒီနှစ် ရာသီမိုးကိုမှီ၍ဆက်ခဲ့သည့်ဆောင်းတုပကောင်းခဲ့.....မိုးတွင်းပြီပြင်မိုးသက်လေနှင်အစချီကာရွာခဲ့သည့်မိုးမိုးကိုငြိုငြင်ရာသီတွင်ကားဒုက္ခများစေမိုးသက်လေ........နွေဟူဘိကားနွေမပြီပြင်အစောရောက်တဲ့မုန်တိုင်းမိုးသက်သည်းထန်ခက်ခဲ့ကြမ္မာလေလားမုန်တိုင်းမိုးသက်နှင်ရန်ခက်ခဲ့မိုးဦးအကျစောခဲ့သည်....မိုးသည်နှောင်းလည်းဆောင်းဦးမလာသည်းသည်းပူကာနေရခက်တဲ့အတု....အဖြစ်ဆောင်းညစ်ပတ်သာရောက်လို့လာခဲ့ခက်သည်ရင်မှာလွမ်းစရာမရှိပကတိသာဆောင်းအတုဟုမှတ်ယူတင်စားပြောလျှင်လေလည်းမှားမည်လား..............။ ။
HAPPY BIRTHDAY ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကလေး
ကိုယ့်ရဲ့ ရင်ထဲကချစ်ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကလေး
ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှသည် သက် ချစ်တဲ့ကို နဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးလက်တွဲပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့
သာယာ အေးချမ်းတဲ့ဘ၀ကိုဆက်တည်ဆောက်နိုင်ပြီး လိုတိုင်းတတိုင်း ပြည့်တဲ့ ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသကာလ
လွယ်ထားရတဲ့ ရင်သွေးလေးကိုကိုယ့် အတွက်အောင်မြင်စွာ မွေးဖွားပေးနိုင်ပါစေ.....
အဲဒီနိုင်ငံကို မသွားခင် အဖေ မှာလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ် လူ့အောက်ကျို့လို့ လူပိမသေဘူးသစ်ပင်အောက်ကျို့ယင်တော့သစ်ပင်ပိသေတတ်တယ်တဲ့။အဲလိုမှာလိုက်တာ တစ်ကယ်တော့လူအောက်ကျို့ယင်းနဲ့ နင်းပြားဖြစ်သွားရတဲ့ ဘ၀ပါ။ငဖြိုးနိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်တာခံရသလို ဒေါ်မိုးမိုးကလည်း ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ် ငွေတော်တော်များများ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ ရတယ် တစ်ကယ်တော့တောင်ပေါ်မှာ သစ်ပင်ပိမသေခဲ့တာအပြေးကောင်းလို့ ဖြစ်ပုံကဒီလို တောင်ကမ်းပါးရံက အပင်ကြီးကိုလှဲတာလူနှစ်ဖက်လောက်ရှိမှာပေါ့ ဆွဲလှဲဖို့ကြိုးကမမှီတမှီ အောက်ကနေချိန်းဆော နဲ့ဖြတ်တဲ့သူကတစ်ယောက်ဲလဲကာနီးအဖျားမှာချည်ထားတဲ့ကြိုးကိုဆွဲလှဲတော့ သစ်ပင်လဲပြီးလူနောက်တဟုန်ထိုးလိုက်လာတာပေါ့တောင်ကမ်းပါးယံကိုး ဘာပြောကောင်းမလဲပြေးတာဖနောင့်နဲ့တင်ပါးတစ်သားတည်းမကျရုံတမည်ပေါ့သစ်ပင်ကြီး အရှိန်မသေမချင်းရပ်မရအောင်ပြေးရတာ နောက်တစ်ခုအတွေ့ကြုံပါ ။လူကအရွတ်တုံးဖြစ်သွားတာ ကမ်းပါးယံကိုညှိတော့ ဘက်ဖိုးနဲ့ညှိတာလေ မြွေတွင်းတွေလည်းရှိတယ် အဲမှာမြွေဖမ်းပစ်လိုက်တယ်ထွက်လာတဲ့မြွေခေါင်းကိုဆတ်ကနဲဖမ်းညှစ်ပစ်တာ အစွယ်နဲ့လွတ်သွားလို့နို့မို့ဆို ချစ်သူမောင်ခုချိန်မှာမရှိတော့ဘူးလေ ဟီး.......ထားပါလေ လူညစ်နေတော့ပေါက်ကရလုပ်ခဲ့ တာလေးအမှတ်တရထည့်ရေးတာပါ ။အဲဒီအချိန်မှာကြောက်စိတ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလေ။လုပ်ချင်ရာစွတ်လုပ်တော့တာ ခုချိန်မြွေတစ်ကောင်လောက်ဖမ်းပြဆိုယင်တော့ ကိုင်ရဲဖို့နေနေသာသာ အသည်းယားတာနဲ့ တင် တခုခုနဲ့ ရိုက်ပစ်မှာ။ချစ်သူမောင်သစ်ပင်ပိလို့မသေပဲလူ့အောက်ကျို့လွန်းလို့ သူများနိုင့်ထက်စီးနင်း လုပ်တာခံရတော့တာအဖေ့ မှာကြားချက်မှားတယ်လို့တော့မပြောပါဘူး ချစ်သူမောင်အတွက်မမှန်တာပါ။ အမှန်တော့ ကိုယ်နိုင်ငံသားက နိုင်ငံခြားမှာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ။လှီးမယ် ခုတ်မယ်ထစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါအဲလိုနဲ့ Hamura မှာမနေနိုင်တဲ့ အဆုံးတိုကျိုကိုပြန်လာခဲ့ တယ် Ikebukoro ဘူတာရုံရှေ့က ပန်းခြံထဲမှာချမ်းချမ်းစီးစီးကြီး ကဒ်ထူပုံးခင်းပြီးအိပ်ခဲ့ဘူးတယ် တောင်ပေါ်ကိုဖုံးဆက်လိုက်တော့ကိုတိုးလှမ်းပေးလိုက်တဲ့လိပ်စာကိုမသွားတတ်လို့ နောက်ပြီး ညမိုးချုပ်နေတာလည်းပါတာပေါ့။နောက်နေ့မနက် ကိုတိုးရဲ့ယောက်ဖ ကိုဘိုဘို အိမ်ကိုသွားရှာတယ် တစ်ကယ်တော့ ကိုဘိုဘို ကစိတ်ထားကောင်းတယ် ကျေးဇူးရှင်တစ်ယောက်ပါအလုပ်လည်းသွင်းပေးတဲ့ အပြင် ငွေကြေးစကားတစ်ခွန်းမှမပြောခဲ့ပါဘူးအိမ်ပေါ်မှာလည်းတင်ထားတယ်ခင်ဖို့လည်းကောင်းတယ် ခုတောကဂျပန်မနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးအပြီးပြန်မလာတော့ဘူး။ဒါပေမယ့် မောင်အဲဒီအချိန်ကငယ်သေးတာကိုး အိမ်ကိုလည်းလွမ်းတယ် (အိမ်နဲ့ မတည့်တာတောင်)သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းလွမ်းတယ် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုလွမ်းတယ် အဲတာနဲ့တနှစ်မပြည့်တပြည့်မှာပဲ ရန်ကုန်ပြန်လာဖြစ်ခဲ့ တာပေါ့ ။အဓိကအဲ့အချိန်ကမီးကိုလွမ်းတာပဲဖြစ်မှာ အသက်ကငယ်သေးတယ် ဆယ်ကိုးနှစ် ကျော်လောက်ပဲ ရှိဦးမှာ ။နောက်တော့မီးနဲ့ အင်္ဂါနေ့တိုင်းလိုလိုတွေ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမယ့်မီး မောင့်ကိုအဖြေမပေးပဲထားတယ် မောင်တော်တော်ညစ်လာတယ် အဲတာနဲ့ မန္တလေး၁၆လမ်းမီးလောင်ပြင်ကိုကံထရိုက်ဆောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ် အဲတာနဲ့ မောင်လည်းမန္တလေး ကိုကံထရိုက်အဖွဲ့နဲ့လိုက်သွားဖြစ်တော့တယ်မောင်တော်တော်ပေပေတေတေ နေဖြစ်ခဲ့တာ ခရီးပေါင်းစုံရောက်လို့ ပေါ့ ပုဂံ၊ညောင်ဦး ၊ပုပ္ပား အစရှိသဖြင့်ပေါ့ အဲမှာမောင့်အစ်ကိုဝမ်းကွဲလူပျို ကြီးတစ်ယောက်ပါတယ် သူမိန်းမရရေးမောင် လှုပ်ရှားတာလည်းပါတယ် ပေါ့။အမျိုးချင်းပေးစားမလို့သူ့ကိုလူကြီးတွေစီစဉ်တာ အမှန်တော့အမျိုးဆိုတာဟိုဖက်မျိုးဒီဖက်မျိုးပါ ဦးလေးမိန်းမဖက်ကအမျိုးနဲ့ သူ့ကိုပေးစားဖို့ ပေါ့ အဲဒီမှာ မောင်လိုက်ပြီးလေနေခဲ့ တာပေါ့၊သူနဲ့စီစဉ် တဲ့ ကောင်မလေးက ကသာက သူနဲ့ တွဲပြီးမောင် ကသာမှာတစ်လလောက်နေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။သူ့ ကြောင့်အမျိုးတွေကြားမှာမောင်တော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တာပေါ့သူ့ကောင်မလေးရဲ့တူမနဲ့မောင်နဲ့ အတော်ခင်ခဲ့ ကြတာကိုး နောက်ပိုင်းလည်း စာအဆက်သွယ်ရှိသေးတယ်ခုတော့ကလေးတစ်ယောက်ဆိုလားနှစ်ယောက်ဆိုလား ရနေပြီတဲ့လေ.....။ ထားပါအဲဒီအရွတ်တုံး စိတ်ဒါဏ်ရာကမပျောက်ခဲ့ပါဘူး ကသာကနေပြန်လာတော့အဖေနဲ့ မတည့်ပြန်ဘူး အဲမှာမန္တလေးကန်ထရိုက်ကဆက်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဘူး။နောက်တော့ရန်ကုန်ပြန်လာ ဘုရင့်နောင် ပွဲရုံတန်း ဆောက်ဖို့စလာရောလေ မောင်ကအလုပ်မကြောက်တတ်တာဆိုတော့ သဲထဲနွံထဲလည်း သွားတာပဲဆောက်တာပဲဆောက်တဲ့ အချိန်တွေမောင်နဲ့မီးဝေးနေခဲ့ကြတယ် မီးကိုမောင်နောက်ဆုံးပေးခဲ့ တဲ့စာထဲကအတိုင်း နှစ်ယောက်စာမောင်တစ်ယောက်တည်းလွမ်းနေပေးပါ့မယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း မောင်ဆိတ်ဆိတ်နေခဲ့ တာပေါ့ .....ဘုရင့်နောင်က(ခ)၂၄ အဆောက်ဦမပြီးခင်မှာပဲ မောင်နောက်တစ်ခေါက် ချယ်ရီပွင့်တဲ့ နိုင်ငံကို ပြန်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရပြန်တယ် ခက်ခက်ခဲခဲဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်က ခက်ခဲခဲ့တယ်လေ ...ဘာလို့လည်းဆိုတော့မြကေခိုင်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုသနားလို့ကူညီပေးခဲ့တာကြောင့်ပေါ့ မောင် သစ္စာမရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး မရှိချင်တော့တာဖြစ်မယ် အဲဒီအချိန်တုန်းက မောင့်စိတ်တွေအခြေနေမဲ့ လေနေခဲ့တယ်လေ....................။
အင်းလေ ဟုတ်ပါတယ် တစ်ကယ်ချစ်တာပါဆိုနေ.....မီး ယုံအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ တစ်ကယ်သိရအောင်မီးကိုမေးလိုက်တယ်လေ ဘယ်သူလဲ ဘယ်ကလဲ တောင်ကြီးကတဲ့ အဲ ...ထားပါတော့လေမီးကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေမျိုသိပ်ပြီး နှစ်ယောက်စာရင်ကအလွမ်းတွေကိုပဲ ကြိတ်ခံစားတော့မယ်ဆိုပြီး မီးရဲ့အပါးကပြေးထွက်ခဲ့ ပေမယ့် မောင်ပြေးလို့မလွတ်ခဲ့ပါဘူး နိုဝင်္ဘာရောက်တိုင်း မီးနဲ့တွေ့ဖြစ်တယ်တစ်ကယ်တော့ နော့(ဗ)ဒက်ဇ ဆိုတာမောင့်အတွက်အိပ်မက်မဟုတ်ပါလား ချစ်ရတဲ့မီးရေ.......အဲဒီမှာအဖေကအပြတ် ကြော်ငြာလာခဲ့ တယ် လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ အတူမီးနဲ့ ဝေးတဲ့အရပ်ချယ်ရီပန်းတွေပွင့်တဲ့ အရပ် ကို သွားချင်နေတဲ့ မောင့်ကို သွားခွင့်ပေးခဲ့ပြန်တယ်.....မီးထံတော့မောင်စာအရေးမပျက်ခဲ့ ပါဘူး ။အဲဒီမှာအလုပ်အပိုင်းရောက်လာခဲ့ ပြန်တယ် ရောက်သွားတဲ့ နေရာကစကီးဂျောနားကအ၀တ်လျှော်ရုံ တစ်ရုံကိုပါ tsumagoi mura ဆိုတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကရွာငယ်လေးတစ်ရွာကိုပေါ့။အဲတာလည်း အဖေ့ရဲ့သူငယ်ချင်းရဲ့သား ကျွန်တော့ထက်အသက်အများကြီးကြီးတဲ့ ကိုတိုး ကခေါ်ပေးလို့ လေ...ရောက်စကတော့အဆင်ပြေပါတယ် ကျွန်တော်နဲ့ အတူငဖြိုးဆိုတဲ့ ကိုတိုးရဲ့ ညီတစ်ယောက်တူတူ ပါ လာတယ်။ သူကနဲနဲဆိုးတယ် အဲ စကီးစီးတဲ့ရာသီကုန်သွားတဲ့အခါ စက်ရုံမှာလူတွေပိုနေတော့တာပေါ့...သူဋ္ဌေးကလည်းလူပိုမထားချင်တော့ ကွန်စထရပ်ရှင် လုပ်နေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းထံလက်ဆင့်ကမ်း လိုက်တယ် ကျွန်တော်နဲ့ ကိုချို့ ကို ငဖြိုးကျတော့ ဘာလို့မပါလဲမေးစရာဖြစ်လာတယ် သူက ကိုတိုးရဲ့ညီကိုး ကိုတိုးကသူဋ္ဌေးရဲ့လူယုံဖြစ်တာဆိုတော့ မောင်တို့ ကံ မောင်တို့ခံပေရော့ စိတ်ကအရွတ်တုံးစိတ် နဲ့ တောင်ပေါ်မှာမြေကြီးပေါက်ရတယ် ဘာလို့လဲဆို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ တောင်တန်းဒေသ ကအင်မန်မှစံနစ်ကျပါတယ် တောင်မပြိုအောင်တောင်နံရံတွေကို ကွန်ကရစ်လောင်းတာပါ အဲမလောင်းခင် အပင်တွေရှင်းလင်း မြေညှိ မြေတိုင်းတဲ့ အလုပ် လုပ်ရပါတယ် ။မြေတိုင်းတော့တြီဂိုမှာသင်ခဲ့ ရတဲ့မနီမနီထထ၊ထထနီမနီမ ကတော်တော်အသုံးဝင်တယ် sin,cos,tan,cotan တွေနဲ့ နိမ့်ထောင့်မြင့်ထောင့်တွေတောင်နံရံရဲ့ အမြင့် အကွာအဝေး တိုင်းတာတွက်ချက်တာတွေ သိနားလည်ခဲ့ ရပြန်တယ်ဒါပေမယ့်မောင်လုပ်ခဲ့တာ မြေကြီးပေါက်တဲ့ အလုပ် ။စိတ်ဒါဏ်ရာရတာကတော့ လူလူခြင်း ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရခြင်းပေါ့ မောင့်ကို သူဋ္ဌေး ဘယ်လိုပဲချစ်တယ်ပြောပြော အလကားပါ ကိုတိုးကလည်းဘယ်လောက်ခင်ခင်ညီအစ်ကိုလို မခင်နိုင်ဘူး ဒါပေမယ့် ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတစ်မျိုး ထပ်ကြုံရတာက မောင်တို့မြေကြီးပေါက်တဲ့အလုပ်က ငွေပိုရတယ် ရတဲ့ လစာကိုသူဋ္ဌေးက ကိုင်ပြီး သူ့စက်ရုံကလခအတိုင်းရှင်းပေးတဲ့အခါနောက်ထပ် စိတ်ဒါဏ်ရာဖြစ်ရပြန်တယ်......စိတ်နာနာနဲ့ အဲဒီတောင်ပေါ်ကိုစွန့်ဖို့စဉ်းစားဖြစ်လိုက်တယ်အဲတာနဲ့ Hamura ကဒေါ်မိုးမိုး ဆိုဂျပန်ကပြန်လာတဲ့သူအတော်များများသူ့အကြောင်းသိကြပါတယ်သူနဲ့ တွေ့ပြန်တော့စိတ်ဒါဏ်ရာထပ်ဖြစ်ရပြန်တယ်.....သူကပွဲစား(အလုပ်) နောက်ပြီး အိမ်ငှားတယ်ကျောချစရာနေရာတစ်ခုကို တစ်လယန်း ၃၅၀၀၀ တဲ့ လေ သူသွင်းပေးတဲ့အလုပ်ကတော်တော်ဝေးတယ်ဘတ်စကားလည်းမပေါက် စက်ဘီးလေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် စီးရတယ် အဲဒေါ်မိုးမိုးရဲ့အိမ်အကြောင်းပြောရဦးမယ် အိမ်ဆိုတာထက်တန်းလျားပါ ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ပိုတူတယ် အားလုံး မိန်းကလေးယောက်ျားလေး တပြေးညီအိပ်ရတယ် ။ မောင်ကတော့အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရမှာအကြောက် ဆုံးပဲ တစ်ကယ့်ငရဲပါတစ်ရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုပေမယ့် သေချင်တဲ့ကျားတောပြောင်းတာပါ....
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်လေ.....အဲဒီမှာကျွန်တောကစိတ်ဒါဏ်ရာအမာရွတ်တစ်ခုရခဲ့တယ် ။အရွဲ့တိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အမာရွတ်တစ်ခုပေါ့။ခစ်ရတဲ့သူကိုရချစ်ခွင့်မပန်ဖြစ်ခဲ့တော့ ပါ။ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းတက်ရင်း ၁၉၈၈ အရေးခင်းဖြစ်တော့ကျောင်းတွေပိတ်သွားခဲ့ ပါတယ်။ အရေးခင်းပြီးခါစ ၁၉၈၈ ရဲ့နိုဝင်္ဘာ နောက်ဆုံးပိုင်းလတွေမှာပေါ့တရုတ်စက်ဘီးတွေပေါခြင်းသောခြင်းဝင်လာတဲ့ အချိန် မှာစက်ဘီးစီးဖြစ်ပါတယ် ကျန်းမာရေးအတွက်အကြောင်းပြဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့တရုတ်ဘီးမစီးဖြစ်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်ဆင်ထားတဲ့ချိုးဘီးလေးကိုသာမြတ်မြတ်နိုးနိုးစီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ မနက်အစောကြီး၎နာရီလောက်ပုံမှန်ထစီးဖြစ်ပါတယ်။တစ်နေ့တော့အဲဒီတနေ့မှာ ချစ်စရာကောင်းသူတစ်ယောက်နဲ့ စတင်တွေကရှိပါတော့တယ်။ စက်ဘီးစီးနေယင်းပေါ့တွေ့တွေ့ချင်း စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဆိုလေမလား...အဲဒီနေ့က နာမည်သိယုံလေးမိတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တာဦးဝိစာရအ၀ိုင်းအနီးမှာပေါ့။ သူ့နာမည်ကမီးမီးတဲ့ သူ့ကို "မီးငယ်"လို့ ရင်ထဲကခေါ်ဖြစ်တယ် နောက်တစ်နေ့သူတို့နဲ့ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က နှင်းတွေတအားကျနေပြီး နိုဝင်္ဘာလ၂၇ရက်၁၉၉၈ ပေါ့။မ၀ံ့ ရဲစွာပဲအပြာရောင်မီးခြစ်လေးတစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။သူကဘာလုပ်ဖို့လဲလို့မေးပါတယ်..ကျွန်တော်ကလည်းမ၀ံရဲစွာဖြေဖြစ်တာက မီးငယ် ချစ်ဖို့တဲ့ ဒီလိုနဲ့ ခင်မင်မှုလေးတွေအစပျိုးခဲ့တယ် အဲဒီအချိန် ကျွန်တော်တို့တတွေရန်ကုန်မြေ အနှံစက်ဘီးလေးတွေနဲ့ ခြေဆန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်မီးငယ်က ကျွန်တောကစက်ဘီးနောက်က ကယ်ရီယာပေါ်ကပေါ့။ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ၁၉၈၈ ရဲ့ ဒီဇင်္ဘာလ၂၅ ခရစ္စမတ်နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ ကုက္ကိုင်း ဘုရားကျောင်းဝင်း ထဲမှာ တစ်နေကုန်နီးပါးပြောလက်စစကားတွေမကုန်အောင်ဖောင်ဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့တယ် အပျော်ဆုံး ကာလတွေပဲဖြစ်လိမ့်မလားပေါ့ ဒါပေမယ့်၁၉၈၉ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက် နေ့ကျွန်တော်ကက်ဆက်ခွေအငှား ဆိုင်လေးဖွင့်ဖြစ်တဲ့ဖွင့်ပွဲကို မီငယ် တို့ ကိုဖိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ် အမှန်တော့စည်းကမ်းချက် ၁၁ ချက်နဲ့မကိုက်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ရင်ထဲက သိုသိပ်ထားခဲ့ တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ မီးငယ်ကို အားလုံးပုံချစ်ခဲ့မိတယ် ။အဲဒီနေ့က အဖေတို့နဲ့ အကြီးကျယ်ပြဿနာတက်တဲ့ နေ့တစ်နေ့အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်မိပြီဆိုမှနောက်မဆုတ်တမ်းပေါ့ဒါပေမယ့် ကံကမကောင်းပါဘူးမီးကိုချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ ပေမယ့် သူ့မှာချစ်သူရှိပြီးသားတဲ့။ခံရခက်တယ်ဘ၀ကအဲဒီလိုပါပဲ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ချစ်မြဲပါ.........စိတ်ညစ်လွန်းအားကြီးလို့ကျွန်တော်အိမ်ကခဏတ ဖြုတ်ထွက်ပြေးဖြစ်ခဲ့တယ် အညာအရပ်ဒေသဆီ သူငယ်ချင်းများရှိရာဆီကိုပါ ။အဲဒီလိုနဲ့စိတ်ဒါဏ်ရာနောက်တစ်ခုထပ်တိုးခဲ့ပေါ့ ပထမကမိဘစကားနားထောင်လို့ ရတဲ့စိတ်ဒါဏ်ရာအမာရွတ်ပါဒီတစ်ခုကတော့မည်သူမပြုမိမိမှုပါလေ........မီးငယ်နဲ့ တစ်ကယ်တော့မဝေးခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမယ့်အသည်းတွေကွဲလိုက်ရတာ.....အချိန်တော်တော်ကြာအခုထိဆိုမလား NOV-DEC ဆိုယင် မီးငယ်ကိုသတိရပါတယ်။
နှင်းနှင့်အတူယူကာဝေမျှအလွမ်းစတို့တမ်းတတွေဝေနွမ်းလျကြွေလွင့်မျောသောက ဝေဒနာတို့သည် လည်းကောင်း..........နှင်းနှင့်အတူပူကာတမ်းတအလွမ်းစတို့နွမ်းလျကြွေလွင့်မျောဒေါသစေတနာတို့သည်လည်းကောင်း..........နှင်းနှင့်အတူယူကာဝေမျှအပျော်စတို့တမ်းတမိသောပူပင်ကြောင့်ကြဝေးလှစွာသောခြေရာဖြစ်တည်ဝေဒနာအစုစုတို့သည် လည်းကောင်း...........နှင်းနှင့်အတူကွယ်ကာလွင့်ပါးအတိတ်များစွာနှစ်လရှည်ကြာရတနာဖြစ်ပုလဲနှစ်သို့ရင်မှာစုထားမျက်ရည်များသည်ရင်မှာစုတည်တိမ်ခိုးကြွေလွင့်မျောလောကဝေဒနာတို့သည်လည်းကောင်း....................နှင်းနှင့်အတူကွယ်ကာလွင့်ပါးတိုကျိုညများတမ်းတတမ်းမက်အိပ်ပျက်ဝေဒနာအရိပ်များစွာတမ်းတပိုခဲ့နွမ်းလျခက်သောစောဒကစေရာစိတ်ဝေဒနာတို့သည်လည်းကောင်း..........နှင်းနှင့်အတူကွယ်ကာလွင့်ပါးအတိတ်ဝေဒနာခြေရာများစွာနှင်းနှင့်အတူပျော်ရွှင်ခံစားနေ့ရက်များစွာပစ္စက္ခမှာနေသာပါ၏သောကဟူ၏ဘယ်မရှိပြီ............။ ။
ချစ်ခဲ့ရတဲ့မီး ဘာတွေတွေးနေလဲ အပျက်ပျက်နဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့ နှာခေါင်းသွေးစက်တွေ ခြောက်သွားတော့မှ.... နော့ဗဒက်ဇ အိပ်မက် တကယ့်အဖြစ်ပျက်တွေတွေးယင်း တခါတရံမှပဲသတိရဖြစ်တယ် တမ်းတတာတော့ဟုတ်ဖူး ထူးမလာတဲ့အဖြစ်မှာ ရူးစရာလည်းမဖြစ်ခဲ့တော့ပါ....... အလွမ်းနေ့စွဲအဖြစ် နှောင်းတခေတ်မှာ အကြောင်းအရာသစ်အတွက် ဆောင်းစအဖြစ်မှာ လွမ်းစရာနေ့စွဲ တမ်းတ နေလည်းမထူး လွမ်းနာကျနေလည်းရူးယုံ ရင်ခွင်သည်းဦး အမြဲစူးခဲ့ ခံရခက်ခက် နေ့ရက်တွေမှာ သတ်ပုံတွေအခါခါမှားလည်း အဓိပ္ပာယ် မှန်ချက် လွမ်းရစ်ခက်အောင် မြူမှုန်တို့ကလုပ်ရက်...... ခပ်ခက်ခက်ပဲနေခဲ့နေ့စွဲ အလွမ်းထဲမှာမောင်မပျော်ပါ ချစ်တဲ့ငယ်ရာ မင်းရဲ့ရုပ်သွင် မြင်ယောင်လေတိုင်း စိတ်ထဲမှိုင်းခဲ့ အလွမ်းနေ့ရက်လား ထင်ယောင်မြင်မှား လွမ်းစကားတွေ အတွေးမှာတွေဝေ မနေသာပါ ဖြေစရာမဲ့ ရင်ခွင်ကလေ နာချင်ရက်နဲ့ နာရန်ခက်ခဲ့ပေမယ့် တမင်နာတယ်.......... အမှတ်မရချင်တဲ့အတိတ် အရိပ်ဖြစ်နေ အတိတ်က ခြေရာ သောကခြေရာကောက် နောက်ကမလိုက်ချင် အင်တင်တင်ပေမယ့် အမှတ်တရတော့ရှိနေဆဲ အမှတ်မထင် ဘ၀တဆစ်ချိုးမှာငါ့ကိုလည်း မင်းချိုးခဲ့တဲ့သစ်စိမ်းချိုး အလွမ်းတွေမပျိုးတော့ပေမယ့် အမှတ်တရတော့ ရှိသေးတယ် မောင်ချစ်တဲ့ "မီး"ရယ်........။ ။ တစ်ခါကတစ်ဘ၀ပါ............. စာရေးသူ
HAPPY BIRTHDAY သူသာလျှင်
လူပြိုကြီး ကိုသူသာလျှင်မွေးနေ့မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီးသကာလ ရည်မှန်းထားသောချစ်သူနှင့်အမြန်ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေ........တစ်ရက်နောက်ကျတာခွင့်လွှတ်ပါ
အဲဒီစကားရပ်လေးကိုနောက်ပြောင်ပြီး ပြောဖြစ် ခဲ့ဘူးပါတယ်။ နောက်ခဲ့ဘူးသလို လည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အမှန်တစ်ကယ်ကျတော့ အဲဒီစကားလေးကအမှန်ဖြစ်နေတတ်ပြန်ရော၊ လက်တွေ့ပါ ။ကျွန်တော်ကပြဿတွေနဲ့ ကင်းကင်းနေတတ်တဲ့သူမဟုတ်လေတော့ ပြဿနာတွေကိုတွေ့တွေ့နေရတာပေါ့ ချစ်သူမောင်ဆိုတာပေါ့သေးသေးကောင်မှမဟုတ်တာ။အခုကမိသားစုပြဿနာတစ်ခုမှာကြားဝင်ပြီး ရေနစ်သူဝါးကူထိုးတတ်တဲ့သူအကြောင်းလို့ဆိုပါစို့။ ဟုတ်ပါပြီ ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ။ ခက်တာကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်စေချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မပြောမဖြစ်ပြောရတော့မယ်။အမှုတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုပါတော့ တရားမမှု ပဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးရောက်တယ်ဆိုယင်အင်မတန်မှခေါင်းစားပါတယ် ။ ရှေ့နေငှားရ အမှုရင်ဆိုင်ရ အမျိုးမျိုးအလုပ်ရှုပ်တော့တာပါပဲ ။အဲဒီမှာရှေ့နေမြှောင် ဆိုတဲ့လူတန်းစားတစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းလာပါတော့တယ်။သူကဥပဒေဘွဲ့လည်းမရ ဘာဘွဲ့မှလည်းမရပါဘူး အမှုသွားအမှုလာကိုကြည့်ပြီးဘာလုပ်သင့်တယ် ဘာကိုင်သင့်တယ်လို့ ညွှန်ပြတတ်တဲ့သူပါ သူကတရားရုံးဝါးဝ နေတာကိုး၊ သူကပဲတရားသူကြီးကိုပိုင်သလိုလို လည်းပြောတတ်ပါသေးတယ်။သူ့ကိုအားကိုးချင်လာအောင်အာဘောင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ပြောတတ်ပါတယ်။အားကိုးဟန်ပြလာပြီဆိုယင်တော့လူမှုရေးအရဆုံးရှုံးရတော့မှာသတိ ထားပေတော့နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ငွေကြေးကိုလှည့်ပတ်ရယူတော့မယ်ဆိုတာပါပဲ။တစ်ကယ်အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူမှာခေါင်းဘယ်လောက်စားမလဲစဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ အဲဒီမှာငွေကြေးအကူညီ တောင်းတာမျိုးပါလာယင် ဘယ်လိုထပ်ခံစားရမလဲ စဉ်းစားသာကြည့်ကြပေါ့ငွေကြေးလို့ဆိုရာမှာချေးငှားတဲ့နည်း သာရှိတာမို့ယုံကြည်ရလောက်တဲ့အထောက်အထားတစ်ခုပေးပြီး သိန်းရာနဲ့ချီချေးတာပါ။ အကြောင်းပြချက်ကောင်းလေးတွေလည်းရှိနေပါလိမ့်မယ် သမီဂျပန်သွားမှာမို့လို့။သားစင်္ကာပူသွားမှာမို့လို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီလိုရုံးဂျပိုး ရှေ့နေမြှောင်ရေနစ်သူဝါးကူထိုးတတ်သူတွေရဲ့ရန်ကနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးရင်း......
အမှတ် တမဲ့ မှ အမှတ်တရသို့ . . . တခါတရံမှာကြယ်တွေတောင်မှုန်ဝါးအတွေးတွေကများစွာရတနာလိုစုရွှေလိုဥထားနေ့ရက်များမှာ.......အတွေးထဲကအလွမ်းစေရာတမ်းစေရာညွှန်နွမ်းရစ်နွံထဲတမ်းတဖြစ်ကျွံအလွမ်းနွံပါ........ကွယ် တွယ်ရာမဲ့ပါတဲ့လွမ်းရစ်လေဦးဘ၀ထဲတွေးဖြစ်ဆူးကြားနစ်သလိုတဲ့လားမတွေးဖူးပါအဲသလိုမျိုးအလွမ်းမိုးစွေနှင်းမိုးဝေတဲ့ရက်မင်းအဝေးသွားတဲ့ရက်မနက်တစ်ခုမှာအလွမ်းစုကြောင့်နွမ်းကြွေစေသားတွေးမှတ်မှားလည်းအနမ်းရင်ခွင်ပန်းသခင်ရေနှင်မှုန်ကြားမှာမင်းသာပိုင်စိုးငါမြတ်နိုးလျှက်ထွေးပွေ့ယုယအကြင်နာတိုးအနမ်းမိုးစွေချစ်သက်သေ........။ ။
♪ အခြားသော Call Recorder များထက်ပိုပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ - Call Recorder - ACR Premium v9.2 APK ♫